प्रधानमन्त्री ओलीको बोली, व्यवहारमा विनम्रता खोज्ने जनताहरु विपक्षी दल समर्थक होइनन्- रबि « Swadesh Nepal
प्रधानमन्त्री ओलीको बोली, व्यवहारमा विनम्रता खोज्ने जनताहरु विपक्षी दल समर्थक होइनन्- रबि
१. शिक्षकको कुटाईबाट विद्यार्थीको ज्यान गयो
कञ्चनपुर । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा निरन्तर प्रश्न उठिरहेका छन्, त्यसमाथि सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने कतिपय शिक्षकहरुको व्यवहार कारण सिंगो शैक्षिक क्षेत्र बदनाम हुने गरेको छ । यसका पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, कञ्चनपुरमा । कञ्चनपुरको भिमदत्त नगरपालिका–१७ स्थित महाकाली बाल विद्यालयमा कक्षा ९ मा अध्यनरत माधव कलौनीको शिक्षकको कुटाइबाटै ज्यानै गएको छ ।
२.नगरपालिकाकै खर्चमा नगरसभामा मदीरा पार्टी !
तनहुँ । सामान्यतया सरकारी कार्यालयले आयोजना गर्ने सार्वजनिक कार्यक्रममा मदीरा प्रयोग गर्न पाइदैन । तर तनहुँको प्यास नगरपालिकाले आफ्नो ३१ आँै नगरसभा स्थलमै मदीरा पार्टी गरेको भिडियो भाइरल भएको छ । आर्थिक बर्ष २०७६—७७ का लागि नगरपालिकाले बजेट घोषणा गर्न आयोजित कार्यक्रममा बजेट भाषणपछि भने नाचगान र मदिरापान सुरु भएको रहेछ । नगरसभा स्थलमा मदीराको चाङ थियो ।
३. मानव तस्कहरुको चङ्गुलबाट भाग्न सफल चेलीको कथा
काठमाडौं । रोजगारीका लागि दलालहरु मार्फत अबैध बाटो हुँदै इराक पुगेकी धादिङकी पुष्पा गुरुङको इराकमा सडक दुर्घटना भयो । कयौं दिन आईसियुमा राखेर बल्ल–बल्ल बाँचेकी उनी दुर्घटनापछि राम्ररी हिँडडुल गर्न सक्दिनन् । दुर्घटनापछि इराकमा उनले वीमाको ५५ लाख रुपैयाँ पाउने भइन् । तर, उनीसँगै बस्ने म्याग्दीका किशन राईले नेपालबाट पुष्पासँगको नक्कली विवाह दर्ता गराई उक्त रकम लिएको पुष्पाको आरोप छ ।